विवश वस्ती शुक्रवार, भाद्र २३, २०७४
बु द्धि नसप्रिएपछि के लाग्छ र ? हुन पनि यसपालि मेरो बुद्धिको भाँडोमा ठ्याम्मै बिर्को लाग्यो । वेलैमा बुद्धि आएको भए मेरा निम्ति यो वर्ष चाँदी–कटाइकै वर्ष साबित हुने रहेछ । अर्थात्, रातारात करोडपति । समयमै जानिएन । नभए, यो वर्ष मैले ललिपप उत्पादन उद्योग खोलेको भए मेरो सुदिन फिर्ने रहेछ । अब पछुताएर के गर्नु ? अचेल सबैले भनिरहेका छन्, ‘यो चुनावी वर्ष रहेछ’ । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ भनेजस्तै यो वर्षलाई वेलैमा ‘नेपाल चुनाव वर्ष’ घोषणा गरेको भए धेरै नै जाति हुन्थ्यो ।
जेहोस्, त्यस्तो घोषणा नभए पनि हामी चुनावी–वर्षलाई भोगिरहेका छौँ । हुन पनि, जताततै चुनावकै छ, माहोल । वर्षारम्भसँगै चल्मलाएको चरण–चरणका चुनावले अझै कति चरण पार गर्ने हो ? चरणदाताहरूलाई नै थाहा होला । तर, म भने वेलैमा ललिपप उद्योग खोलेर यसको असल व्यापार गर्न नसकेकोमा निकै नै पछुताएको छु । खिन्न छु र ललिपपको राम्रो व्यापार गरिरहेकाहरूप्रति ईष्र्याले फुलेको छु । कुन समय कुन उत्पादनले मार्केट लिन्छ भन्ने अज्ञानतामा जेलिँदा म पछि परेँ, धरोधर्म ।
ललिपप व्यापारीहरूले यसअघि दुई–दुई पटक राम्रै व्यापार गरिसके । अहिले उनीहरूको व्यापार मधेशतिर सरेको छ । मंसिरतिर त झनै देशभरि नै यसका व्यापारीहरूको व्यस्तता बढ्ने देखिएको छ । तर, अचेल चतुर व्यापारीहरू भने मधेशमा ललिपप बेच्न तल्लीन देखिएका छन् । म उनीहरूले ललिपप बेचेको देखेर भित्रभित्रै मुर्मुरिएको छु र आफ्नै बुद्धिलाई धिक्कारिरहेको छु । र, निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मिच्नेहरूलाई सचेत तुल्याएजस्तै म अचेल आफ्नै समय–निरपेक्ष बुद्धिलाई सचेत गराइरहेको छु, ‘तैंले हावा खाइस्, बुद्धि ।
नराम्ररी हावा खाइस् ।’ललिपप व्यापार कसरी फस्टाइरहेको रहेछ त ? मैले मधेशका केही भू–भागतिर नजर फ्याँकेँ । एकजना व्यापारी ललिपप देखाउँदै भनिरहेका थिए, ‘हाम्रो कम्पनीबाट उत्पादित यो ललिपप धेरै नै गुलियो र स्वादिलो छ । तपार्इंहरूले यो ललिपप खानुभयो भने यसको स्वाद, गुणस्तरीयता, चमकपन सबै थाहा पाउनुहुनेछ । हाम्रो ललिपप खानुहोस्, स्वादको भरपूर उपयोग गर्नुहोस् ।’
अर्का ललिपप व्यापारी पनि ललिपप बेच्न व्यस्त थिए । उनका ललिपप त झनै रंगीबिरंगी थिए । उनी भन्दै थिए, ‘यो उच्च विदेशी प्रविधिद्वारा बनाइएको ललिपप हो । एक पटक मात्र जिब्रोमा राख्नुभयो भने यसको स्वादले तपार्इंलाई जिन्दगीभर लठ्याउने छ । स्वाद, गुणस्तरका हिसाबले हाम्रो यो ललिपपलाई अरू कुनै पनि ललिपपले उछिन्न सक्दैन । एक पटक चुस्नु होस्, आनन्द लिनुहोस् ।’ अर्का व्यापारी के कम ? उनी आफ्नो ललिपपको प्रचार झन् ठूलो र कडा स्वरमा गर्दै थिए, ‘तपाईंहरू अरूका ललिपपमा नभुल्नुहोला । ती सबै नक्कली हुन् । आज तपार्इंहरूलाई त्यसको स्वाद बताएर चुस्न लगाउँछन्, भोलि नै पछुताउनुहोला ।
तिनीहरूले बेच्ने ललिपपमा विदेशी रंग मिसिएका छन्, विदेशी कम्पनीबाट उत्पादित हुन् । तर, हामीले बेच्ने ललिपप भने आफ्नै रङ र स्वदेशी कम्पनीमा उत्पादित हो । अरूको रङमा नभुल्नुहोस्, आफ्नै रङको ललिपप चुसेर आनन्द लिनुहोस् ।’ ललिपपको व्यापार चम्किएको देखेर मैले सोचेँ, अझै एक–दुई वटा चुनाव बाँकी नै छन् । कि आजै ललिपप उद्योग खोलेर उत्पादन थालूँ र व्यापार गरूँ ? तर, अधिकांश शुभेच्छुकको एउटै सुझाव रह्यो, ‘ढिला भयो । वेलैमा बुद्धि पु¥याएनौँ । होइन भने तिम्रो ललिपपले मार्केट पिट्थ्यो ।’आफ्नै बुद्धिलाई धिक्कार्दै बसिरहेछु ।